"Balaa kanarraa hafuun isaanii, akka waan haaraa dhalatanitti fudhanna" - Yaadannoo waggaa 21ffaa balaa xayyaaraa Komoroos - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Namoota kanneen lubbuun hafan keessaa Obbo Asmallaash Sibhaatuu isaan tokko
Odolli Komoroos Galaana Hindii gidduutti, Kibba Baha Afriikaatti kan argamtu wayita taatu, tuuriistoonni biyyoota addunyaarraa dhufan hedduunis akka iddoo bashannanaatti filatu.
ALA bara 1996 Sadaasa 23 garuu tuuriistoonni achi turaniifi jiraattonni odolichaa, wanta gaddisiisaa argan.
Xayyaarri Daandii Xayyaara Itoophiyaa Lakkoofsa balali'aa ET 961 ta'e, erga butamuun sa'aatii afuriin booda boba'aa fixachuun qarqara Odola Komoroositti galaana keessatti kufe.
Yommuu bishaanicha waliin dhahu, saffisa sa'aatiin km 324n balali'aa ture. Kanaanis xiyyaarri iddoo baay'etti addaan caccabee lubbuu namootaa hedduus galaafate.
Hojjettoota xayyaarichaa dabalatee, imaltoota 175 keessaa 125 lubbuusaanii dhaban. Kanneen 50 tahan ammoo carra qabeessa ta'uun hafuu danda'an.
Namoota kanneen lubbuun hafan keessaa Obbo Asmallaash Sibhaatuu isaan tokko.
Obbo Asmallaash umuriin isaanii ganna 83 ta'us, akka guyyaa dhalootaatti maatii isaanii waliin kan kabajatan garuu ganna 21ffaa dha.
Intalti isaanii Aaddee Edan Asmallaash, ''Abbaan keenya gaafas balaa kanarraa hafuun isaanii, akka waan haaraatti dhalatanitti fudhanna,'' jechuun ibsiti.
''Nuuf gammachuu turullee, isaaf garuu miira walmakaa ture. Guyyaa sana ennaa yaadatu, namoota achitti lubbuu isaanii dhaban yaadata, akkasumas waan ofiisaan hafeef gammachuunis itti dhagahama,'' jechuun ibsiti Edan.
''Daa'imman achitti lubbuu dhaban, wayita kana mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuru turan,' jechuun gadda isaa ibsa,'' jetti Edan.
Kana malees abbaan ishee akkaataan xayyaara kana itti yaabbatan, haala adda ta'e turuu isaalleen BBC'tti himteetti.
''Asmaraa irraa xiyyaara qabachuun Finfinnee galan. Achiin booda gara Naayiroobii imaluuf wayita yaalan, xayyaarichi guutuu akka ta'e itti himame,'' jetti.
Obbo Asmallaashis maamila Daandii Xayyaaraa Itoophiyaa waan turaniif, akkuma ta'etti iddoon argameefi xayyaara sana yaabbatan. Hiriyaa isaanii yeroo dheeraas achumatti arganii gammadan.
''Haa tahu malee iddoon isaanii tokko waan hin turreef, waliin taphachuuf akka isaanii tolutti, dubartii hiriyaa isaanii waliin teessu gaafachuun, iddoo jijjiirratan,'' jetti.
Xayyaarri namoota sadiin butamee kun qilleensarra sa'aatii afuriif dirqisiifamuun yaa balalii'u malee, garuu kan ka'ee balaliinsa sa'aatii lamaafi walakkaa qofaaf ture. Boba'aan sa'aa afuriif gahaa ta'e hinturre.
Balaliisan (Paayileetichii) fi gargaaraan isaa garuu jarreen butaniin, 'boba'aa gahaa hinqabnu. Iddoo dhihootti qubannee guutuu qabna,'' jedhan illeen jarri tole hin jenne. Motorri xayyaarichi qabu lamaanuu, tajaajila kennuu didan.
Xayyaarichis humnaa fi saffisa guddaan gara galaanaatti gadi bu'uu jalqabe. Balaliiftoonni xayyaarichaas Kaappiteen Li'uulii fi Yoonaas, xumura irratti odola Komoroos qarqara bishaanitti lafa dhahuun, bakka hedduutti caccabe.
Tuuriistoonnii fi jiraattoonni dhihoo waan turaniif, fiiganii bira gahuun reeffa namoota hedduu bishaan keessaa baasan. Akkasumas, lubbuu namoota 50 baraaran.
Dubartiin iddooshee Obbo Asmallaash waliin jijjiirteefi hiriyaan isaanis carra-qabeeyyii hintaane.
Paayileetiin xayyaara kanaa Kaappiteen Li'uul Abaata, dhiibbaa guddaa qaamaa fi sammuu jarreen sadan irraan gahan dandamatee, bishaanirra qubachiisuusaaf, miidiyaa hedduun gocha Li'uul raawwateef 'goota' jechuun leellisan.
Har'a Obbo Asmallaash fi maatiin isaanii Keeniyaa, Naayiroobii jiraatanis guyyaa dhalootaa lammaffaa Obbo Asmallaash 21ffaa kabajaa jiru.
Moodeelli xayyaara kanaa - Boeing 767-260ER yommuu tahu, Daandiin Xayyaaraa Itiyoophiyaa bara 1987tti haaraasaa bite.
Kaappiteen Li'uul Abaataa fi gargaaraa isaa Yoonaas Makuriyaatu balalisaa turan.
Xayyaarichis namoota 175 fe'uun Finfinneerraa gara Naayiroobii balalai'aa ture.
Gidduutti namoonni sadi xayyaaricha butuun 'Awustraaliyaa nu geessaa, kun ta'uu baannaan boombii dhukaasna,'' jedhan.
Imala sa'aa 2:30'f gara imalasaa jalqabaa Naayiroobiitti kan ka'e xayyaarri kun, sa'aa afur qilleensarra jooruun boba'aa fixate.
Galaana Hindii, Odola Komoroos cinaatti lafa dhahe.
Imaltootaafi gurmuu balali'aa dabalatee125 du'an.
Paayilatii fi gargaaraasaa dabalatee, namoonni 50 lubbuun bahaniiru.
Jarri butan sadanuu lammiilee Itiyoophiyaa wayita turan, sadanuu du'aniiru.
Lammii Itoophiyaa ajjeechaa Niiw Ziilaandirraa lubbuun hafan